कस्तो अचम्म घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा पाइने « हाम्रो ईकोनोमी
सामान्यतया हामीले आफूसँग भएको कुनैपनि कुरा बेच्दा ग्राहकलाई आकर्षण गर्नको लागि विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराउँछौँ ।
अझ आजभोली त एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा भन्ने नियम नै लागू भएको छ । तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो समाचार भाइरल भएको छ जसले पुरा विश्व नै चकित परेको छ ।
गोप्य अंगमा धान रोप्ने ‘धानवाली’ ले खोलिन यस्तो रहस्य !
काठमाडौं । विगत केही दिन देखि सामाजिक सञ्जालमा एक तस्वीर निकै चर्चित भइरहेको छ । असार १५ मा धान दिवस मनाइरहँदा एक युवती एकाएक चर्चामा आइन् ।
ती युवतीले आफ्नै शरीरमा धानको बीउ रोपेर फोटोशूट गराएकी थिइन् । उनको फोटोशूट सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भयो । यससँगै उनी को हुन् भन्ने चासो पनि बढ्यो । तर अब पिर गर्नुपर्दैन किनभने हामी यस बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौ ।
यी युवतीको नाम रितिका जिरेल हो । उनी पेशाले एक मोडल हुन् । एक सय भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी मोडल रितिका जिरेलले आइतबार धान दिवसको अवसरमा आफ्नै शरीरका गोप्य अंगमा धान रोपेकी थिइन् । यस विषयमा उनले रमाइलो जवाफ दिएकी छिन् ।
उनका अनुसार नेपालमा खेती योग्य जग्गाहरुमा प्लटिङ गरेर सबैतिर बाँझो राख्नुका साथै घर बनाउन थालेपछि जग्गाका अभावमा आफूले यसरी रोपाईं गरेको बताईन् ।
२५ सयमै बाईक र १० हजारमै बोलेरो कार बेचीदै
जनकपुर भन्सार कार्यालयले विभिन्न ब्राण्डका ३ सय ६१ वटा सवारीसाधनहरु लिलामी गर्ने भएको छ । बिक्री गर्ने सवारीसाधनहरुमा मोटरसाइकल धेरै मात्रामा छन् भने कार, जीप, बोलेरो जीप लगाएतका छन् ।
बुधबार सुचना निकाल्दै तीन सय ६१ आइटमहरु लिलामीमा बिक्री गर्ने गरि इच्छुन नेपाली नाग।िक तथा नेपाली फर्महरुबाट गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
दुई खण्डमा प्रकाशित भएको एक्त सूचनामा पहिलो खण्डमा १ सय ८१ आइटम तथा दोस्रो खण्डमा १ सय ८० आइटम राखिएको छ भने इच्छुक नेपालीहरुले सूचना प्रकाशित भएको २१ ीदन भित्र गोप्य शिलबन्दी पेश गर्नु पर्नेछ ।
आफुले इच्छाइएको सवारीको कबोल गरेको रकमको १० प्रतिशत् रकम को.लो.नि.का. धनुषा षखाको धरौंटी खाता नं. १२२०२०३०००००० राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखामा कार्यालयको कोड नं. ३०५०२१७०१ राखी जम्मा गरेको भौचर सक्कलै भौचर बुझाउनु पर्ने जनाएको छ ।
सवारी साधनहरु हेर्न वा थप जानकारी लिनु परेमा हरेक हप्ताको शुक्रबार दिनको १५ः०० बजे देखि १७ः०० बजेसम्म सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
दुबइकी राजकुमारी तीन सय करोड लिएर भाग्नुको
भारतले स्वीकार्यो लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो
भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको